သမိုင်းဗျူရို ၃၅	10Nov11
ခုနောက်ပိုင်းမှာ ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းဆုရ သမိုင်းစာအုပ်တွေကျမ်းတွေ သက်သက်ထွက်လာတာလည်း ဝမ်းသာစရာတွေ့ရပါတယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်းက လူထုအတွက်ရည်ညွှန်းစာကြည့်တိုက်ကြီးဖွင့်ထားပီလို့လည်းသိရပါတယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ ပြင်ပမှာ သမိုင်းလေ့လာလိုက်စားသူများအတွက် မှီငြမ်းကိုးကားစရာ စာအုပ်တိုက် စာစောင်တွေ ဝက်ဆိုက်တွေ ပွားများထွန်းကားလာမယ်လို့ ပရိသတ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးရေချိန်အရ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ Share this:ShareFacebookPrintEmailTwitterLike this:Like Loading...
Filed under: history, radio talk	| 1 Comment	One Response to “သမိုင်းဗျူရို ၃၅”	Feed for this Entry
BINO on November 20, 2011 said:
Reply	« Burma mapped? 34